Matotra kininina - Moi Mili
Kodiarana fanabeazana ho an'ny zazakely sy ny zaza.
Ao amin'ny magazay an-tsika, dia afaka mividy matetin'ny teepee quilted vita amin'ny tanana ihany koa ianao. Ireo kasim-baravarana mahafinaritra ireo dia famenon-tena mahafinaritra ho an'ny tranolain'i Moy Mili.
Ny felam-bonika teepee marevaka sy ny modely ho an'ny ankizy dia singa lehibe amin'ny haingo amin'ny efitrano an'ny ankizy, fa ambonin'izany rehetra izany dia mamorona toe-javatra tena mahafinaritra izy ireo. Ny tsihy malefaka sy mahazo aina dia afaka miparitaka na aiza na aiza - any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, amin'ny terasa na ao amin'ny zaridaina. Ny tsihy teepee ho an'ny ankizy dia mifangaro tsara amin'ny omby vita amin'ny tanana - ireo lahatsoratra ireo dia namboarina tamim-pahalalana manokana ny antsipirihany.
«Matsiro voninkazo» ho an-jaza
Mat ho an'ny ankizy "mitete tantely"
"Volontany mavokely malefaka" mavokely matevina
Fandrika volo an-tsoroka maditra
«Blue circus» matotra manga ho an’ny ankizy
Mat ho an'ny ankizy "vatomamy misy tsiro"
Afatory ny tsiran'ny ankizy
Akan'ny ankizy "karamel"
Tsaramaso / ravina amina ravina 3 ondana
"Fasika" ny ankizy
Akoran'ny ankizy "vovo-mavokely mavokely"